Sawir sawir ah Farshaxanada Dhaqanka
Qeybta:Warqadaha Iskaashiga1 min akhris
Ololaha Maalgalinta Farshaxanka Farshaxanka ah oo socdo
Farshaxanada isboortiga (JXTA) ayaa bilowday ololaha ugu weyn taariikhda, oo ah $ 14 milyan oo ah olole dhaqaale oo lagu dhisayo xarun qalab casri ah goobteeda hadda ee Waqooyiga Minneapolis. McKnight waxay samaysay deeq lacageed oo dhan $ 1.3 milyan sababtoo ah waxaan aaminsanahay shaqada JXTA iyo aragtida qiimaha ururkan farshaxan ee dhalinyarada ah.
"Waxaan rajeyneynaa in kuwa kale ay arki doonaan suurtagalnimada aan ku aragno Farshaxanka Dhaqanka. Ololahan ra'iisal wasaarada waa fursad ay ku muujin karaan waxa ay si fiican u daneeyaan, ganacsi-dhaqaale, ganacsi bulsheed oo raasumaal ah oo ka shaqeyn kara bulshada iyo fannaaniinta ka shaqeynaya gudaha, "ayuu yiri madaxweynaha McKnight Kate Wolford.
JXTA waxay kor u qaadaysaa lacag si ay u dhisto xarun cusub, laakiin ujeedooyinka mashruucan ayaa si fiican u socda intaan dhisin dhisme cusub. Qaab dhismeedka qorshaysan ee geeska Emerson iyo Broadway waxay ku jiri doonaan barnaamijyo cusub oo la ballaariyay, waxay shaqaaleeyeen farshaxanno cusub iyo kuwo farshaxan leh iyo naqshadeeyayaasha, waxayna hubiyaan in dhalinyaradu ay heli karaan farshaxanka jiilalka soo socda.
Intaa waxaa sii dheer, in ololaha sii wadi doona JXTA, ololuhu wuxuu xoojinayaa dadaalka dheeriga ah ee ururka ee xaafadda iyo horumarinta siman ee Waqooyiga Minneapolis iyo Waddada West Broadway. Marka sidaas la samaynayo, mashruucu wuxuu gacan ka geysan doonaa dhisidda dhaqanka, dhaqaalaha, iyo bulshada caasimadda ee Waqooyiga Minneapolis.
$ 14 milyan ayaa bixin doonta qarashka dhismayaasha jira (horeyba loo bilaabay) iyo dhismaha dhisme cusub, iibsashada qalabka iyo alaabta, ballaarinta barnaamijka, iyo sanduuqa kaydka. Ololahan afarta sano ah wuxuu soo gabgabeyn doonaa May 31, 2022.
Si aad wax dheeraad ah uga ogaatid ololaha caasimadda JXTA, la xiriir DeAnna Cummings deanna.cummings@juxtaposition.org ama 612-588-1148.